Thomas Dekker kụrụ Gold Psychological Horror na "Jack Goes Home" - iHorror
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Thomas Dekker meriri Gold Psychological Horror na “Jack Goes Home”
Thomas Dekker meriri Gold Psychological Horror na “Jack Goes Home”
edere ya Waylon Jordan October 12, 2016
Jack na-ala dị ka isiokwu nke ihe ọchị ọchị ọchị ma ọ bụ ihe ngosi dị mma banyere njem nwoke laghachi na mgbọrọgwụ ya iji chọta onwe ya. Mgbe ọ rutere ebe ahụ, ọ ga-ahụ otu ndị hụrụ ya n'anya ma chọọ ịzụlite nrọ ya ma nyere ya aka bụrụ ụdị kacha mma ọ nwere ike ịbụ. Ọ bụ otu n'ime ihe nkiri ndị ahụ na-eme ka ị nwee obi ụtọ na afọ ojuju mgbe ego ahụ dara.
Nke ahụ bụ BỤGHỊ ihe nkiri nke Thomas Dekker kere. Kama nke ahụ, dị ka ihe ndị ọzọ na-emebi mmụọ nke mmụọ, aha ya bụ aghụghọ.
Ka ihe nkiri ahụ meghere, Jack Thurlowe (Rory Culkin) na-aga n'ihu ụbọchị ndụ ya mgbe ọ natara oku ekwentị. Ndị mụrụ ya enweela ihe mberede ụgbọ ala. Egburu nna ya, mana nne ya (nke Lin Shaye na-enweghị atụ na-egwuri egwu), n'agbanyeghị nchikota na ọnya, anwụghị. N'oge na-adịghị anya ọ na-ala n'ụlọ iji lekọta nne ya ma dozie olili nna ya. Nke ahụ bụ oge nsogbu ya malitere n’ezie.
Ihe na - esote bụ njem na - adịghị ngwa ngwa n'oge gara aga dịka Jack na - eche ihu na ihe omume site na nwata ọ dị ogologo oge ọ kwụsịrị. Ka nrọ ya na-arọ nrọ malite ịbịakwasị eziokwu ya, ụwa ya na-agba aghara aghara.
Culkin na-enye ọrụ na-egbuke egbuke dị ka Jack, nke dị nro na nke na-adịghị ike ka a na-ekpughe psyche ya. Mkpughe ọ bụla nke na-abịa na-agbanwe ya na onye na-eme ihe nkiri na-edeba aha na-agbanwe na ahụ ya dum. Amachaghị m na ahụla m Culkin ka ọ rụọ ọrụ ka mma. Ihe m ji n’aka mgbe m lechara ihe nkiri a bụ na anyị nwere ike ịtụ anya na ọ ga na-edu ndú mgbe mgbe n’ọdịnihu. Ọ bụghị naanị na ọ nwere ezigbo amamihe, mana o nwere ikike ebumpụta ụwa nke ịrata ndị na-ege ya ntị ịgbaso usoro ọ bụla ọ bụla na ihuenyo.
Ma mgbe ahụ, enwere Lin Shaye. Shaye bụ Meryl Streep nke ụwa egwu na ọ gosipụtara, ọzọkwa, na ọ bụ ike a ga-agụ na ọrụ Teresa, nne Jack. Otu oge ọ bụ nne na-enweghị nsogbu na ịhụnanya ma na-esote ya na iwe na ime ihe ike. Otú o si eme nke ahụ na nkwenye dị mfe dịka ihe omimi dị ka nwanyị ọ na-egwuri egwu.
Dekker gbara ọtụtụ ndị na-eme ihe nkiri na ndị na-eme ihe nkiri n'egwuregwu ahụ. Daveigh Chase (aka Samara in Mgbanaka) na-enwu dị ka ọrụ ezigbo enyi Jack, na Louis Hunter na-enwete ihe dịka Jack's sexy na-esote onye agbata obi nwere ike ma ọ bụ nwere ike ọ gaghị enwe ebumnobi ọjọọ. Lee anya na ị ga-ahụkwa Nikki Reed site na Uhie aha ya na nso nso a dika Betsy Ross na Fox Ra na-ehi ụra.
Ma na ihe niile na talent ga-efu na-enweghị ịtụnanya ọrụ n'azụ Mpaghara. Ederede Dekker na ntuziaka na-eme ka ndị na-ege ntị maa amụma, na-enyeghị ntọala siri ike ebe ha ga-eguzo. Ọ na-eji aghụghọ ebugharị anyị site n'eziokwu gaa na nro ma laghachi ọzọ dị ka iberibe n'elu bọl Jọ dị na fim ahụ dị adị, na nke kachasị njọ, a pụghị ịgbanahụ ya n’ọsọ.
Ejikọtara ya na akara nhụsianya nke Ceiri Torjussen na ihe nkiri Austin F. Schmidt nke mara mma, nke a bụ otu ihe nkiri ị na-achọghị ịhapụ.
Jack na-ala weputara na cinemas na na VOD October 14, 2016 site na Foto ndị dị na oge. Lelee ndepụta mpaghara gị wee lee ihe nkiri a ASAP! Ihe nkiri a bu ihe nkpuchi nke obi nke kwesiri ka o buru.
Jack na-alaLin ShayeRory KulkinThomas DekkerWaylon Jordan
"The Craft" na-ezute "Pụtara Girlsmụ agbọghọ" na egwu "Givertaker" dị mkpirikpi
26 N'EZI OZI Zigara Ihe Nkiri Egwu Egwu Iji Lelee ALLlọ A